Indawo yokusebenzela e-Afrika eseMazantsi, intle yokuvuyela iSeychelles
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » Indawo yokusebenzela e-Afrika eseMazantsi, intle yokuvuyela iSeychelles
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo • Iindaba zaseZambia eziQhekezayo
Seytshels iboniswe kwindibano yocweyo e-Afrika eseLusaka, eZambia eRadisson Blu Hotel ngoFebruwari 12, 2020 ngolunye ubudlelwane obuyimpumelelo phakathi kweBhodi yeZokhenketho yaseSeychelles (STB) kunye neeNkonzo zokuThengisa ngeHouston.
Umsitho, oqale ngorhatya lwangoFebruwari 11, kunye necocktail yokunxibelelana eLatitude 15 Ihotele ibonelele ngendawo engamiselwanga ngokusesikweni kwiqela le-STB ukuba lidibane nabaphathi abaphezulu abangama-40 beeArhente zokuHamba kunye nabaninzi abaphambili boKhenketho lwasekhaya, behlaziya nabo ngophuhliso lwamva nje lwendawo ekuyiwa kuyo.
Kuwo wonke lo msitho wonxibelelwano, ummeli oPhetheyo weNtengiso oMkhulu, Nksk.Natacha Servina kunye noLawulo lwezeNtengiso, UNks Ingride Laurencine babe nethuba lokuseka uthungelwano kunye nokukhulisa umdla wendawo ekuyiwa kuyo.
Indibano yocweyo yosuku olunye ibone ukuthatha inxaxheba kweenkampani ezingaphezulu kwama-20 apho iqela le-STB lithathe ithuba lokuzisa iSeychelles njengendawo ekufanele ukuba ibonwe kwiparadesi, kufutshane nemakethi yaseZambia.
Ukuqinisa isicwangciso-qhinga sentengiso ngexesha lomnyhadala, iqela libandakanya iintlanganiso zomntu ngamnye kunye nabathathi-nxaxheba, ebavumela ukuba baveze ulwazi olubalulekileyo lokuya kwindawo uninzi lwabasebenza kubakhenkethi kunye neearhente zokuhamba ezikhoyo kwindibano.
Njengenxalenye yomsitho, abathathi-nxaxheba bazibandakanye kumzobo weerali apho babenethuba lokuphumelela amabhaso ahlukeneyo aquka iinqwelomoya, indawo yokuhlala, ii-safaris kunye nezinye izinto ezimnandi.
Benza amagqabantshintshi ngalo msitho, iQela le-STB livakalise ukoneliseka kwabo kukuzimasa kwabantu abali-110 abasuka kwiinkampani ezahlukeneyo ezingama-66 zohambo nezokhenketho.
“Ubukho bethu obuqhubekayo eSpotlight kungenxa yodumo esasizenzele lona kwimakethi yaseZambia. Ngoku sisebenza ekwandiseni ukubonakala kweziqithi zethu ezintle kuloo nxalenye yehlabathi njengoko iLusaka liziko lezorhwebo elikhula ngokukhawuleza, elinabantu abaninzi abahlala ngaphandle kwaye uqoqosho lwaseZambia luqhuba kakuhle ngoku. Sihlala siyiphupha kubantu abaninzi kulo mmandla njengoko besazi ngokufikeleleka kwendawo ekuyiwa kuyo. Ujoliso lwethu luhleli ekwandiseni ukubonakala kwelizwe kwingingqi yeAfrika, ”utshilo uNkosikazi Servina.
Iqela le-STB kwabelwane ngalo ngeSeychelles nabathathi-nxaxheba ngesipho esiphambili seTakamaka Rum Chest, ebandakanya iibhotile ezimbini zeramu eyaziwayo eyenziwe apha kwiiSeychelles Islands kunye noNks Lisa osuka eMukwa Travel and Tours.
Iindaba ezingakumbi malunga neSeychelles.